OBRANI - waa nooc cusub oo casri ah
Dhamaadkii sannadkii hore ee Ukraine ayaa u muuqday OBRANI - nooc cusub fashion. Qaar badan ayaa go'aansaday in nooca Talyaanigu yahay nooc caan ah. Xaqiiqdii, maaha saxeexa taariikhda taariikhda.
Abuurayaasha Tani Elena Reva iyo Elena Maistrenko waxay abuurtay ereyga Ukriga ah "oo la soo doorto" turjubaan Ingiriis ah. Fikradda noocan oo kale ah, mid waa inuu sheegaa, waa mid ka mid ah dad badan oo ka mid ah tandem dhalinyarada.
Waxay is yaqaaneen midba mid kale sideed sano, taas oo macnaheedu yahay inay yihiin saaxiibo sideed sano. Elena Reva iyo Elena Maistrenko - moodhadhkii ku soo baxay xirfad guuleysta dibadda, muddo dheer ayaa ku riyootay in ay tijaabiyaan ciidamada in aysan aqoonin oo kaliya, waxa ay ku nool yihiin - fashion. Ururkii ugu horreeyay ee OBRANI oo magaciisa la yiraahdo PERSHA duo Reva-Maistrenko ayaa muujisay dhammaadkii 2009. Bandhiga hoteelka HYATT, 200 oo VIP oo isugu soo ururay, oo aad u kala duwan: fannaaniinta Ani Lorak, iyo kuxigeenka Lesia Orobets, oo qabanqaabiyey toddobaadkii Fashion Week, Irina Danilevskaya, iyo kaniisada cilmaaniga ah Alexander Chervonenko. Maalintii xigtay, OBRANI qolka bandhigga ee xarunta dhexe ee magaalada Kiev, iyo bil ka dib waxay u dabaaldegeen guushoodii - ururintooda soo iibsiga ayaa si buuxda loo iibiyey. Waan ku raacsanahay, ma guuleysi xun ee shirkad yar yar, sidaa darteed waxa qarsoodi ah?
Sidaas, waa maxay dammaanad qaadka guusha noocan oo kale ah OBRANI - nooca casriga cusub?
Waan neefsanaa waxa aan qabano. Maalin kasta waxay u habboon tahay fashion. Waxaan ogahay in dad badani ay ka shakiyeen qorshaheena, waxay yiraahdaan, labada nooc waxay noqon doonaan kuwo ciriiri ah, ururinta ugu horreysa waxay dhammaan doontaa. Ha sugin! (qosol). Our romantic iyo fashion ayaa kaliya bilaabay oo waxay noqon doontaa waqti dheer.
Katya Osadchaya oo ka tirsan "Life Secular" ayaa sheegtay in dharka OBRANI - oo ah qarashyo cusub oo dhar ah oo ka yimid 1000 euro. Miyuu qaali karaa bilowga ah?
Katia - oo ah ganacsigeeda, waxay ogyihiin sida kor loogu qaado qiimeynta barnaamijka (dhoola-cadeyn). Xaqiiqdii, kharashka alaabooyinka lagu soo bandhigay bandhigga wuxuu ka bilaabmaa hal kun ilaa shan kun oo hryvnia, iyada oo ku xidhan xaddiga dharka iyo culeyska shaqada. Waxaan ku dadaalnaa qiimaha ugu sarreeya ee qiimaha, sidaas darteed dhar iyo naadi waa qaali, qiimaha ma aha mid cirka sare leh.
Aan ku soo noqonno aasaaska hoose: siduu OBRANI u muuqday - waa nooc cusub oo casri ah iyo maxaad u samaysay laba moodood oo guulaystay oo si lama filaan ah u go'aansada inay noqdaan naqshadeeyayaasha?
Dhab ahaantii , waa sheeko dheer, iyo riyadii hore. Lena iyo anigu waxaan ku dhex maraayey xayawaanka, ka soo guuray waddanka, waxay sameeyeen xirfad mihnadeed, isla markaasna waxay ku riyoodeen in maalinnimada ay naga qaadaan meesha naqshadayaasha. Dabadeed Lena waxay tagtay Faransiiska, waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo barnaamijka Savik Shuster ee "Half of the Third", ayaa is guursaday, waxay dhalatay mucjiso yar oo magaceedu yahay Vasilisa. Iyada oo la ii soo diray gabayga quruxda badan iyo ninkayga daryeeli jiray, noloshii isbedelay ee nolosha Lenin iyo waxay ku noqotay waddankeedii. Waqtiga qaar ayaa soo maray, wax walbana way soo mareen, waayihii waayo-aragnimadii Lenin waxay u yimaadeen wax aan waxba ahayn, waxaana ku soo laabannay fikradda ah abuurista nooca OBRANI.
Waxaad si xushmad leh uga fogaaneysaa inaad weydiiso su'aalaha ku saabsan Lena iyo Omar Arfush, oo ay ku nooleyd Paris muddo afar sano ah. Laakiin ka dib, mawduucan wuxuu sii wadi doonaa inuu xiiso u leeyahay suxufiyiinta - Lena Maystrenko: Dhegayso, aan u jawaabi karo. Hal mar. Wakhtigan ayaa noqon doona kii ugu dambeeyey. Waxaan la noolaa Omar muddo afar sano ah. Waxay ahayd mid kala duwan: labadaba farxad iyo murugo, jacayl iyo kala go ', wax kasta waxay ahaayeen sida ay u dhacdo dhammaan sheekooyinka quruxda badan. Iyo erayga muhiimka ah ee halkan ahaa. Maya maya. Waxaan u mahadcelinayaa Cumar wax walba, laakiin inaan abaabulo waagii hore ma jirto wax macno ah, oo aan dib ugu soo celiyo wax walba. Maanta nolosheyda waa qurux. Waxan ku hawlanaa wax aanan aniga iskood u maleyn karin, waan ku faraxsanahay oo waxaan eegaa oo kaliya.
Yaa kaa caawiyey inaad abuurto ururinta ugu horreysa?
Waxay u egtahay in cosmos naftiisa - aanu la kulannay dad badan oo qurux badan: koox ka mid ah hoteelka HYATT, oo isu diyaarisay nala soo socodsiinta, DJ Dima Hardtennis, oo muuqday nolosheena laba cisho ka hor intaan la soo bandhigin oo lagu maareynay si ay isugu darsamaan jid wayn. Guud ahaan, markii ugu horeysay ee rabitaankeena ah in aan abuurno ururinta waxaa bartay Victor Anisimov. Ka dib markii qoraalkayagu, wakhti yar oo la joojiyey, ka dibna Victor wuxuu naga dhigay liis gareysiga iyo xayawaanka xirfadda naqshadeynta, wuxuu ku tilmaamay dhibaatooyinka aan wajihi doonno. Laakiin wali waxay rabtaa inay abuurto OBRANI.
Anisimov wuxuu naga caawiyey inaan wax ka qabano xirfadlayaasha iyo naqshadeeye. Waa hagaag, waxay bilowday ... -
Lacagta PERSHA waxaa si buuxda loo iibiyey bil gudaheed ... Lena Maistrenko: Annagu, dabcan, dhiiri galin guulahan. Miyaanu nafteena u oggolaanay in aan ku nasano? Maya, maya, mar dambe maya.
Hadda waxaan ka shaqeyneynaa ururinta labaad ee OBRANI isla markaana isku diyaarinaya ururinta safarka, taas oo noqon doonta qof weyn oo la yaab leh, sababtoo ah waxaa la abuuri doonaa wada-xaajood leh ... Ma dhihi doono! Yaa muujiya siraha sida (qosol).
Afar nooc oo ah naqshadeynta sneaker oo leh calaamad muujinaysa guriga guriga Japan
Toddobaadka Xilliga Fashion Week Moscow ayaa furmay
Qarsoodiga Fiktooriya wuxuu leeyahay "cusub"
Agaasimayaasha cusub ee DKNY
Sidee loo labistaa ilmaha dayrta
Cunto-qabatooyin suugo fudud oo fudud
Waxbarashada gabdhaha iyo noocyada jilayaasha
AIDS, cagaarshowga? Sawir cusub oo Dima Bilan ah ayaa la yaabay internetka
Cagaha Shiinaha iyo duugis
Daryeelka guriga ee maqaarka saliid leh
Munaasabado festifaal ah oo loogu talagalay daryeelka jirka ee Yves Rocher
Beerleh waa la kariyaa
Solarium, sida loo saxo qoraxda
Sida loo soo jiito nasiib, lacag iyo jacaylka sannadka Firaaqaaqa: Cibaadada caanka ah
Caafimaadka qofka iyo qaab nolol caafimaad leh
Salad leh kaabajka, daikon iyo karootada
Sidee u taageertaa ilmo kadib furiinka waalidka
Pasta leh digaag iyo broccoli
Sida loo diyaariyo ultrasound ee uurka
TOP-3 oo macquul ah: jiilaalka jilicsan ee jilicsan 2016-2017